लगानी सदुपयोग र सुरक्षा चुनौती : डा. चन्द्रमणि अधिकारी | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ जेष्ठ ९ बिहीबार, ०१:३१
२०७६ बैशाख ८ गते प्रकाशित, l १३:०३
डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद : अहिले देशको आर्थिक अवस्था अलि चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक वृद्धिको हिसाबले पनि सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमा पुग्ने स्थिति रहेन । व्यापार घाटा पनि बढाउँछौं भने पनि उच्च दरले बढ्दै गइरहेको छ । ८० अर्ब गएका सात महिनाको व्यापार घाटा देखिएको छ । यससँगै समस्त आर्थिक परिसूचकहरूलाई हेर्ने हो भने पनि सोधनात्मक घाटा बढेको छ । पुँजीगत खर्च जहिले पनि २५/२५ प्रतिशत भन्दा बढी भएकै छैन ।
किसानलाई अनुदान दिने, विकासमा बजेट थप्दै जाने चालू बजेट पनि खर्च भएको देखिएन । सबै कारणहरू हेर्दा आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । केही केही कुराहरू निराशाजनक छैनन् । पर्यटकहरू बढिरहेका छन् । तर, पर्यटक आय बढेको छैन । यसमा अब तुलनात्मक सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
अर्कोतिर लगानीको सम्बन्धमा पनि समस्या छ । स्वदेशी विदेशी लगानीको प्रस्ताव आउँछन् प्राप्त भएको देखिन्न । हामीले वैदेशिक लगानी सम्मेलन त गरिरहेका छौं तर त्यसको फाइदा सरकारलाई भएको छैन । प्रतिबद्धता जाहेर गरेको र आशय गरेको लगानी आउन सकेन । हामीले यो कुरालाई समीक्षा गर्नुपर्ने पनि छ । यही सेवा, कार्यशैलीबाट अघि बढियो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्न योजना समयमै पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले हाम्रो काम गराइको शैली र तरिका परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
अहिले हामीकहाँ परियोजनाको काम गर्नलाई जनशक्तिको अभाव छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसकारण यी पक्षलाई ध्यानमा राखेर रोजगार सिर्जना गरिदिने, सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने, परम्परागत शैलीलाई तोड्नेलगायतका काम गरियो भने केही सुधार आउँछ ।
= नीतिगत परिवर्तन,
= संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने,
=केन्द्रीय सरकारको क्रियाशीलता बढाउने,
= तीनै तहले अप्ठेरालाई समाधान गर्दै लैजाने
= निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने,
= अरू देशको उदाहरणलाई हेरेर सिक्ने,
= कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने,
= विदेशी लगानी सही किसिमले भित्र्याउने,
= लगानीकर्तालाई सुरक्षाको विश्वास दिलाउने,